ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်သုံး Truck Refrigeration Unit စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ တေးရေး
SC-D စီးရီးသည်အကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသော ၇-၁၀.၅ မီတာရှည်လျားသောထရပ်ကားတစ်စီးအတွက်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်သုံးထရပ်ကားအအေးခန်းဖြစ်သည်။
Truck Refrigeration SC စီးရီး၏နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
သက်ဆိုင်သောအပူချိန် （℃） -20 ～ 30 -20 ～ 30
သက်ဆိုင်သောအသံအတိုးအကျယ် 0℃（m3） 40 ～ 60 50 ～ 70
သက်ဆိုင်သောအသံအတိုးအကျယ် -18 （（m3） 50 60
အအေးစွမ်းရည်（W） ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 30 ℃0℃ 8200 9200
အပူစွမ်းရည်（W） ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်-20 ℃0℃ 4000 5000
အရွယ်အစား （mm） 1960 * 1644 * 692 1960 * 1644 * 692
အလေးချိန် （kg） 500 530
SC-80D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SC-90D နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်
operating အပူချိန်၏ 3. Wide အကွာအဝေး: -30℃~ + 50℃ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်။
၄။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်မြန်ဆန်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောရေခဲသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စက်နှင့်အတူပူပြင်းသောဓာတ်ငွေ့ရေခဲစနစ်။
5. လျှပ်စစ် standby ယူနစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
SC-D Series ၏အသေးစိတ်နည်းပညာနိဒါန်း
၁။ တိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု - အီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့အဆို့ရှင်နှင့် PID algorithm ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးဝါးနှင့် high-end အအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၂။ မိုက်ခရိုချန်နယ်နည်းပညာ - ရေခဲသေတ္တာယူနစ်များ၏မိုက်ခရိုချန်နယ်အပူလဲလှယ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ ပိုမိုထိရောက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
ပြွန် -fin အပူ exchanger နှင့်အပြိုင်စီးဆင်းမှုအပူလဲလှယ်၏နှိုင်းယှဉ်
4. Brushless ပန်ကာ: brush brush ၏သက်တမ်းသည်နာရီပေါင်းများစွာမှနာရီ ၄၀,၀၀၀ အထိတိုးလာသည်။ ပန်ကာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၂၀% ကျော်ပိုများစေပြီးစွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ system optimization အောင်မြင်ရန်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာနှင့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း
၅။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအပူစွမ်းအင်နည်းပညာ - ပေါင်းစပ်ထားသောအပူဓာတ်ငွေ့ကိုရှောင်ကွင်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအအေးနှင့်အပူပေးစက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ပြင်ပရာသီဥတုနှင့်အညီအပူလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်ကာအကဲဖြတ်ရာတွင်အပူချိန်နိမ့်သောရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းကားနှင့်လေအေးပေးစက်များ ...